Showing posts sorted by relevance for query Yangon Police. Sort by date Show all posts
မြို့လယ်ခေါင် တရားမ၀င်နိုင်ငံခြားငွေ ရောင်း/၀ယ်သူများကို အရေးယူ
3/17/2014 06:14:00 PM crime-news
နေရာများ၊ ဧမာနွေလဘုရားကျောင်းဘေးနေရာများ၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ဆူးလေဘုရားလမ်းဆုံအနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာများနှင့် ဆူးလေဘုရားလမ်း
နှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဆုံအနီး ပတ်ဝန်းကျင်နေရာများတွင် ပလက်ဖောင်းဂိုက် များက နိုင်ငံခြားသား ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များကို အနှောက်အယှက်
ပေးလျက်ရှိသူများကို ခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း Yangon Police မှသိရသည်။
၎င်းတို့သည် ကား/လေယာဉ် လက်မှတ်ရောင်းခြင်း၊
သတင်းများအရ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှရှင်းလင်းဆောင်ရွက် ခဲ့ရာ စိုးကျော်သူ ပါ(၈)ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သဖြင့် ကျောက်တံတားမြို့မ
ရဲစခန်းမှ ခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းYangon Policeမှသိရသည်။
ဆက်လက်၍ စီမံချက်ချမှတ်ကာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ တိုင်းအကူတပ်ဖွဲ့ခွဲ၊ လုံခြုံရေးတပ်ခွဲ(၂)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အနောက်ပိုင်း
ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အထူးမှုခင်းနှိမ်နင်းရေးဌာနစုမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှ
တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ သတင်းတပ်ဖွဲ့ခွဲမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး
ဦးစီးဌာနမှအင်အားများပါဝင်သည့် ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဖြင့် အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်
များတွင် စောင့်ကြည့်စုံစမ်းဖမ်းဆီးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဇွန်သက် ပါ(၂၂)ဦးတို့ကို
ပါ(၃)ဦးတို့ကို ထပ်မံဖမ်းဆီးရမိသဖြင့် ပန်းဘဲတန်းမြို့မရဲစခန်းမှ
များကို စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်သတင်းစုံစမ်းကာ ဆက်လက်အရေးယူ
သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း Yangon Police မှသိရသည်။
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၌ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် CCTV မှတ်တမ်း Video file အား လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြလာခဲ့ရာ ၎င်းအမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့မှဆောင်ရွက် ထားရှိမှုအားသိရှိစေရန်နှင့် နောင်တွင် အလားတူ မှတ်တမ်းများကို ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုပါရန် မေတ္တာရပ်ခံခြင်း
8/05/2014 09:11:00 AM crime-news
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၄
၉.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၂၃၀ အချိန်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ဗိုလ်အော်ကျော်လမ်း
ရှိ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းဆိုင်ရှိ CCTV မှ မှတ်တမ်း Video file အား လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများတွင် ဖော်ပြခဲ့
သဖြင့် ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
၎င်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွင် ကိုသန်းဇော်ဦးမှာ ဓါးဖြင့်ထိုးခံရ၍သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး အမျိုးသား(၂)ဦးတွင် ပေါက်ပြဲဖူးရောင် နာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ပြစ်မှု
ကျူးလွန်သူများကို လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်း (ပ)၈၁၆/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂/ ၃၂၅/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်
ခဲ့ရာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများဖြစ်သော လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ဖြိုးကိုကို၊(၁၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးခင်သန်း၊ ငြိမ်းချမ်း(ခ)သက်မောင်မောင်၊(၁၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမြင့်ဌေး၊ မျိုးဇော်၊ (၂၄)နှစ်၊(ဘ)ဦးတင်ဝင်း၊ အရှည်ကြီး(ခ)နိုင်လင်းထွန်း၊(၁၇)နှစ်၊(ဘ)ဦးတရုတ်ကြီး၊
တင်မောင်မျိုး၊ (၁၃)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမျိုးတင့်တို့(၅)ဦးအား ၁၀.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၃၁၀ အချိန်တွင် အခင်းဖြစ်ပွားပြီး (၅)နာရီ အတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဖြစ်
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍လည်း ၁၀.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် Yangon Police လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှ သတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါသည်။
အမှုမှဖမ်းဆီးရမိသည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအားစစ်ဆေးရာ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစဉ် ငြိမ်းချမ်း(ခ) သက်မောင်မောင်မှ ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျန်လူများမှ ၀ိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ကာ ဓါတ်ဘူး၊ ပန်းကန်လုံးများဖြင့် ရိုက်နှက်၊ ပစ်ပေါက်ခဲ့ကြ
ထိုသို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ချက်များအရ မြောက်ပိုင်းခရိုင်ဥပဒေရုံးသို့ ဥပဒေ
အကြံပြုချက်တောင်းခံခဲ့ပြီး အကြံပြုချက်နှင့်အညီ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂/၃၂၃/၁၁၄
ဖြင့် ၁၈.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ငြိမ်းချမ်း(ခ)သက်မောင်မောင်၊ မျိုးဇော်နှင့် ဖြိုးကိုကိုတို့(၃)ဦးအား ရဲစခန်းစွဲချက်အမှတ် (၇၉၉/၂၀၁၄) ဖြင့်
မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသို့ တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့ရာ ပြစ်မှုကြီးအမှတ်(၁၂၁/၂၀၁၄)
ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကလေးသူငယ်များဖြစ်သည့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တင်မောင်မျိုး
နှင့် အရှည်ကြီး(ခ) နိုင်လင်းထွန်းတို့(၂)ဦးအား ရဲစခန်းစွဲချက်အမှတ်-၇၉၉(က)/၂၀၁၄ ဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်တရားရုံး သို့ တရားစွဲတင်ပို့ခဲ့ရာ ကလေးသူငယ်ပြစ်မှုကြီးအမှတ်(၁၈/၂၀၁၄) ဖြင့်လည်းကောင်း လက်ခံစစ်ဆေး လျက်ရှိပါသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်သည့် အခင်းဖြစ်လ္ဘက်ရည်ဆိုင်ရှိ CCTV Camera မှတ်တမ်း video file အား တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင်
ဖော်ပြခဲ့သည့်အတွက် ကြည့်ရှုသူ ပြည်သူများအနေဖြင့် စိတ်ထိခိုက်ခြင်း၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အပြင် မလိုလားအပ်သော
ပြဿ နာများဖြစ်ပွားလာနိုင်ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်၏လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်နိုင်ဖွယ်
ရှိသဖြင့် အလားတူ video file များအား နောင်တွင်ဖော်ပြခြင်းမပြုပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ
ဓါးနဲ့ ထိုးပြီး ချစ်သက်သေပြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံ
2/10/2014 08:27:00 PM crime-news
၉.၂.၂၀၁၄ရက်နေ့၂၃၃၀အချိန် စက်ဆန်းနယ်မြေ ရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ သည် ကြည်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ အလတ်ချောင်းရပ်ကွက်တွင် လင်မယား (၂)ဦး၊ မိမိကိုယ်ကို ဓါးဖြင့်ထိုးကြသဖြင့် ဒဏ်ရာများ ရရှိနေကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် ဇနီးဖြစ်သူတို့တွင် ၀မ်းဗိုက်များ၌ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်စီရရှိ ထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်ဟု Yangon Police အင်တာနက် စာမျက်မှာ ဖော်ပြထားပါသည်။
ဖြစ်စဉ်အား စုံစမ်းရာ ၎င်းတို့(၂)ဦးသည် အရက်သေစာ သောက်စား ထားကြပြီး စကားများကြရာမှ တစ်ဦးကို တစ်ဦးမည်မျှ ချစ်ကြကြောင်းကို သက်သေပြမည်ဟုဆိုကြကာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှမိမိကိုယ်ကို ၀မ်းဗိုက်အား ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့သဖြင့် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ဇနီးဖြစ်သူမှလည်း မိမိကိုယ်ကိုဝမ်းဗိုက်အားဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့သဖြင့် ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်တို့ ကိုယ်စီရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၎င်းတို့(၂)ဦးအား ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ရာ အတွင်းလူနာ (မစိုးရိမ်ရ)များအဖြစ် ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကို ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့ကြပြီး သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့ကြသူ ဇနီးမောင်နှံ(၂)ဦးအား စက်ဆန်းနယ်မြေရဲစခန်း (ပ)၄၅/၂၀၁၄၊ ပုဒ်မ ၃၀၉ ဖြင့်အမှုဖွင့်လှစ်ကာ အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း Yangon Police သတင်းအရ သိရှိရပါသည်။
တရားလိုကနေ တရားခံ ပြန်ဖြစ်တဲ့ သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် လက်ကောက်လု ခံရတဲ့ ရည်းစားဟောင်း
12/11/2013 05:13:00 PM crime-news
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်းက yangon police facebook မှာပါတဲ့ ရည်စားဟောင်းဖြစ်သူမှ လက်ကောက်အား လုယူသွားမှု သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကာယကံရှင်မှ ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ပြန်လည်တရားစွဲ လိုက်ကြောင်း Myanmar News Now မှ သတင်းရရှိပါသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့က Yangon Police Book မှာပါတဲ့ သာကေတမြို့နယ်နေ မနုနုထွေး၊ (ဘ)ဦးအုန်းလွင်က ၎င်းအား ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ အောင်နိုင်ဦးမှ ရွှေပုဇွန် စားသောက်ဆိုင်မှာ စားသောက်ပြီးအပြန်မှာ ကားနှင့်ခေါ်လာခဲ့ပြီး မယူလျှင် သတ်ပစ်မည်ဟုပြောဆို၍ သန်လျင်ဘက်သို့ မောင်းနှင်ခဲ့ကြောင်း၊ မနုနုထွေးက အိမ်ပြန်ပို့ပေးရန်ပြောပြီး ကားပေါ်မှ ဆင်းမည်ပြုစဉ် ဆံပင်ဆွဲပြီး လည်ပင်းကို လက်နှင့်ရိုက်ကာ ကားကိုဆက်မောင်း၍ သာကေတ အေးနန္ဒာ တည်းခိုခန်းအနီး အရောက် ကားရပ်သဖြင့် ဆင်း၍ဖုန်းဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်မည်ပြုစဉ် ဖုန်းကို လုယူရိုက်ခွဲကာ မနုနုထွေး ၀တ်ဆင်ထားတဲ့ စိန်လက်ကောက် (၁)ကွင်းကို ဆွဲချွတ်လုယူ မောင်းနှင်သွားသည့်အတွက် မနုနုထွေး က ၉.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့မှာ သာကေတနယ်မြေရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ခဲ့ရာ ၎င်းရဲစခန်း (ပ)၄၆၅/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၃၈၂ ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်း တစ်ပုဒ် ပါရှိခဲ့ပါသည်။ …..။
အဆိုပါ သတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကာယကံရှင် အောင်နိုင်ဦးက ၄င်းနဲ့ မနုနုထွေးတို့ဟာ ၂၀၀၃/၂၀၀၄ ခုနှစ် ကတည်းက သမီးရည်းစားဖြစ်ခဲ့ပြီး မနုနုထွေး ယခုလုပ်ကိုင်နေတဲ့ H2O အမည်ဖြင့် Decoration လုပ်ငန်းကို နှစ်ဥိးသား အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့ ကြောင်း၊ ၄င်းနောက် မိဘများ“ သဘောဆန္ဒအလျောက် လုပ်ငန်းခွဲထွက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သော်လည်း H2O လုပ်ငန်းမှ ငွေကြေးပစ္စည်း တစ်စုံတစ်ရာ မယူခဲ့ကြောင်း …. ၆.၇.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ကိုအောင်နိုင်ဦးသည် ၄င်းအလုပ်ရုံတွင် သူငယ်ချင်း ဗိုလ်ကြီး ကျော်ကျော် ထွေးနဲ့ စကားပြောနေစဉ်မှာပင် မနုနုထွေးက ဗိုလ်ကြီး ကျော်ကျော်ထွေးထံ ဖုန်းဖြင့် ထမင်းစားဖိတ်ခဲ့လို့ အောင်နိုင်ဦးလည်း လိုက်သွားပြိး အပြန်မှာ ဗိုလ်ကြိး ကျော်ကျော်ထွေး၊ မနုနုထွေးနှင့်အတူ ကိုအောင်နိုင်ဦး မောင်းသည့်ကားနဲ့ ပြန်လည်ခဲ့ကြောင်း၊ တာမွေက ဘရိုက်စတား ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာ အောင်နိုင်ဦး ဆံပင်ညှပ်တဲ့ အချိန်မှာလည်း မနုနုထွေးတို့ ၂ ဥိးလည်း ထိုင်စောင့်နေ ခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းနောက် အောင်နိုင်ဦးဟာ ဗိုလ်ကြိး ကျော်ကျော်ထွေးကို လိုက်ပို့ပြီး မနုနုထွေးနဲပပြန်လည်စဉ်မှာပင် လက်ထပ်ယူရန် ပြောဆိုရင်း သန်လျင်ဘက် ရောက်ကာ စကားအခြေအတင်ဖြစ်ပြီးပြန်လ်ာစဉ် သန်လျင်တံတားအဆင်းအရောက် ကားရပ်စဉ် မနုနုထွေးမှ ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး ၄င်းကို ရိုက်နေတယ်ဟု အော်သဖြင့် ၀ိုင်းကြည့်နေတဲ့လူအုပ်ကို ရှင်းပြပြီး မနုနုထွေးအား ကားပေါ်ခေါ်တင်သည့်အခါ မလိုက်ဘဲ ဆက်အော်နေသဖြင့် ထားခဲ့ပြီး ကားကိုမောင်းလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းဖြစ်စဉ်အား မနုနုထွေးမှ ချဲ့ကားပြီး တိုင်တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၄င်းတိုင်ချက်မှာပါတဲ့ လုယူသွားတဲ့ စိန်လက်ကောက်ဟာလည်း အောင်နိုင်ဦးက မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးထားတဲ့ လက်ကောက်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
မနုနုထွေးက ဘယ်လိုဘဲ စွပ်စွဲတိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း ဖြစ်စဉ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စစ်ဆေးပြီး ဥပဒေရုံးအဆင့်ဆင့်ကို အကြံညာဏ် တောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ စွပ်စွဲချက်ဟာ မမှန်ကန်ဘဲ သာမန်စကားများရန်ဖြစ်မှု ပုဒ်မ ၃၅၄/၅၀၆/၃၂၃/၄၀၃ နဲ့ဘဲ အကြံပြုခဲ့ တယ်လို့ သိရှိရကာ သာကေတတရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းလျက်ရှိကြောင်းနှင့် စိန်လက်ကောက် လုယူသွားကြောင်း မမှန်ကန် တိုင်ကြားတဲ့ မနုနုထွေးကို ကိုအောင်နိုင်ဦးက ပုဒ်မ ၂၉၄/၃၂၃/၅၀၀ ဖြင့် ပြန်လည် တရားစွဲဆိုထားကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးရုံးမှ သိရှိရပါသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)ရှိ ပရိဘောဂစက်ရုံ ယနေ့နံနက် မီးလောင်
11/06/2013 05:14:00 PM Myanmar-news
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၆
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ဦးရွှေဘင်လမ်းနှင့် ဦးခင်ညိုလမ်းထောင့်ရှိ ပရိဘောဂစက်ရုံတွင်ယနေ့ နံနက်၀၆း၄၅အချိန်က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းYangon Policeမှသိရသည်။
အဆိုပါနေရာသို့ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် (၅)စီး၊ မီးသတ်ယာဉ် (၅၆)စီးတို့ဖြင့်
ရောက်ရှိငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ နံနက်၀၇း၁၅အချိန် မီးညွန့်ကျိုးသွားခဲ့ပြီး
ရှော့ဖြစ်၍ မီးလောင်ခဲ့သဖြင့် သစ်အချောထည်များသိုလှောင်ထားသည့် ဂိုဒေါင်မှာ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး တန်ဘိုးငွေကျပ်သိန်း (၁၀၀၀)ခန့်
ဆုံးရှုံးခဲ့ရသဖြင့် ပရိဘောဂစက်ရုံမန်နေဂျာအား ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့မရဲစခန်း(ပ)၅၃၈/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ဖယောင်းတိုင်မီးကြောင့် ဝေဘာဂီမြို့သစ်တွင် မီးလောင်
10/31/2013 01:26:00 PM Myanmar-news
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၃၁
နေအိမ်တွင်ယနေ့နံနက် ၀၈း၄၅အချိန်ကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းYangon Policeမှသိရသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မြို့နယ်မီးသတ် ဦးစီးမှူးနှင့်အဖွဲ့တို့မှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ်(၃)စီး၊ အထောက်အကူပြုယာဉ်(၆)စီး၊ မီးသတ်ယာဉ်
(၂၅)စီးတို့ဖြင့် ရောက်ရှိမီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ နံနက်၀၈၅၅အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
နေအိမ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းဆေး ဖေါ်စပ်ရာတွင်အသုံးပြုသော
တောင်ဆိတ်ဆီများထည့်ထားသည့် ပုံးပေါ်တွင်တင်၍ ဖယောင်းတိုင်မီး
ထွန်းထားရာမှ ဖယောင်းတိုင်လဲကျပြီးမီးစွဲလောင်ခဲ့သဖြင့် နေအိမ် (၂)လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး တန်ဘိုးငွေကျပ် (၃၉)သိန်းခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့သဖြင့် မီးကိုပေါ့ဆစွာသုံးစွဲသူ ဒေါ်-----အား ဝေဘာဂီနယ်မြေရဲစခန်း
(ပ)၃၀၉/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိကြောင်း သိရသည်။ဓါတ်ပုံ -Yangon Police
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကိတ်မုန့်စက်ရုံတွင် ယနေ့ နံနက် ဘွိုင်လာအပူချိန်လွန်ကဲရာမှ မီးလောင်
10/27/2013 11:21:00 AM Myanmar-news
ရန်ကုန်- အောက်တိုဘာ ၂၇
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုံ(၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းနှင့် ကုန်းဘောင်လမ်းထောင့်ရှိ
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း Yangon Policeမှသိရသည်။
မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မြို့နယ်မီးသတ်
ဦးစီးမှူးနှင့် အဖွဲ့တို့မှ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် (၃)စီး၊ မီးသတ်ယာဉ် (၂၀)စီးတို့ဖြင့် ရောက်ရှိမီးငြိမ်းသတ်ခဲ့ရာ နံနက်၀၇း၂၅အချိန်တွင် မီးငြိမ်းသွားခဲ့ကြောင်းသိသည်။
အဆိုပါမီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်မှာ မုန့်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည့် ဘွိုင်လာအိုး
စက်ရုံအတွင်းရှိဆီပေပါ (၂)လုံးနှင့် မော်တာ (၂)လုံးတို့အား
လှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၂၄၁/၂၀၁၃၊ ပုဒ်မ ၂၈၅ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူ
ဓါတ်ပုံ- Yangon Police
မော်တော်ယာဉ်၌ ရဲတပ်ဖွဲ့စာတမ်းနှင့် စတေကာတံဆိပ်များအား အယောင်ဆောင်တပ်ဆင်အသုံးပြုသူကို စစ်ဆေးအရေးယူ
5/09/2014 03:57:00 PM crime-news
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၌ POLICE စာတမ်းနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တံဆိပ် ကပ်ထားသည့် YGN 9D 3595 နံပါတ်
တပ်ဆင်ထားသော မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအား မသင်္ကာဖွယ်တွေ့ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသည့် နိုင်ငံများထဲတွင် ထိပ်ဆုံး၌ မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ဟု ထိုင်းဒုရဲချုပ် ပြောကြား
11/13/2013 09:01:00 AM political-news
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသည့် နိုင်ငံများထဲတွင် ထိပ်ဆုံးစာရင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်နေပြီး အများစုမှာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် စေခိုင်းခြင်းနှင့် အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းတို့ ခံနေရကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ Royal Thai Police မှ ဒုတိယ ရဲချုပ် Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံRoyal Thai Police မှ ဒုတိယရဲချုပ် Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ Hotel Yangon ကျင်းပခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ တရားစီရင်ရေး အပိုင်းတွင် ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆွေးနွေးပွဲတွင် သတင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
"လူကုန်ကူးမှု သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတစ်မျိုးကတော့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း အတွက် လူကုန်ကူးခြင်း၊ ဒုတိယကတော့ အလုပ်စေခိုင်းဖို့အတွက် လူကုန်ကူးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယကတော့ သူတောင်းစားအဖြစ် ခေါ်ပြီးတော့ လူကုန်ကူးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ဆုံးကတော့ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် လူကုန်ကူးခြင်းက ထိပ်ဆုံးက ရှိပါတယ်။ ခံရတဲ့ သားကောင်တွေထဲက အများဆုံးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လာအိုနိုင်ငံသားတွေက ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် လူကုန်ကူးခံရတာ များပါတယ်။ ထို့အတူ အလုပ်စေခိုင်းဖို့အတွက် လူကုန်ကူးခြင်း ခံရတာက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ များပါတယ်" ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Royal Thai Police မှ ဒုတိယရဲချုပ် Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က ထပ်မံ ပြောကြားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများထဲတွင် တရားဝင်လာပြီး လူကုန်ကူးခံရခြင်းမျိုး ရှိသလို တရားမ၀င်လာပြီး လူကုန်ကူးခံရခြင်းများ ရှိကြောင်း သိရှိရပြီး ၎င်းတို့မှာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် ခိုင်းစေခံရခြင်းနှင့် အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေ ခံရခြင်းတို့တွင် အများစုပါဝင်ပြီး သူတောင်းစားအဖြစ် ခိုင်းစေခံရခြင်းတို့လည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လူကုန်ကူးခံရသူများသည် တရားဝင် လာရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည်ဖြစ်စေ လူကုန်ကူးခံရပါက ၎င်းတို့အား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသလို တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုသည့် အလုပ်သမား ဥပဒေနှင့်လည်း အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံ Royal Thai Police မှ ဒုတိယရဲချုပ် Pol.Gen.Chatchawal Suksomjit က ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
မိုးရေစိုနေသည့် တီဗွီအင်တာနာတိုင်အား လှည့်၍ချိန်သူ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်ခံရသဖြင့် သေဆုံး
7/05/2014 09:06:00 AM crime-news
၃.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၅၃၀ အချိန်တွင် တွံတေးမြို့မရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တွံတေးပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ အမျိုးသားတစ်ဦးဓါတ်လိုက်ခံရသဖြင့် သေဆုံးရောက်ရှိ
နေကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက် စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ တွံတေးမြို့နယ်
နေ ဖိုးထွား(ခ)ထွန်းအောင် (၂၄)နှစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၌ ရင်ဘတ် မီးလောင်ဒဏ်ရာများ
ရရှိကာ သေဆုံးနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ ၎င်းသည် ၁၃၃၀ အချိန်ခန့်က ဇနီးဖြစ်သူနှင့်အတူ နေအိမ်၌
တီဗွီကြည်နေစဉ် နေအိမ်ခေါင်းရင်းရှိ မိုးရေများစိုနေသည့်တီဗီအင်တာနာတိုင်အား
လက်ဖြင့်ကိုင်ကာလှည့်ချိန်ရာမှ ဓါတ်လိုက်ခံရကာ လဲကျခဲ့သဖြင့် ဆေးရုံသို့
(၁၆/၂၀၁၄)ဖြင့် ရေဖွင့်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
7/02/2014 08:13:00 PM crime-news
၁.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၄၀၅ အချိန် ဒဂုံမြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင်အမျိုးသားတစ်ဦး ဓါတ်လိုက်သေဆုံးရောက်ရှိနေကြောင်း သတင်းအရသွားရောက်စစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ ပန်းရံအလုပ်လုပ်ကိုင်သူ မောင်ဝေလင်းအောင်ဖြစ်ပြီး ၀ဲလက်ဖ၀ါးနှင့်
၀ဲလက်သန်းတို့တွင်အရေပြားပွန်းစုတ်ဒဏ်ရာ၊ ယာခြေသန်းတွင်ညိုမဲဒဏ်ရာများ ရရှိ ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ ၎င်းသည် ဒဂုံမြို့နယ်၊ ယောမင်းကြီးရပ်ကွက်ရှိ နေအိမ်
တစ်အိမ်တွင် ရေချိုးခန်းအိမ်သာ ပြုပြင်ဆောက်လုပ်နေသော ပန်းရံအဖွဲ့တွင် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၃၀၅ အချိန်ခန့်က အဆိုပါ နေအိမ်ရှိရေချိုးခန်းတွင်
ပြူတင်းပေါက်တပ်ဆင်ရန်အတွက် ဆောက်ရွက်နေစဉ် ၎င်း၏နောက် ဘက်ရှိနံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော မိုးရေစိုနေသည့် AIR CON အား လက်ဖြင့်ကိုင်မိရာမှ ဓါတ်လိုက် ကာ ဒဏ်ရာရရှိသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၎င်းသေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဒဂုံမြို့မရဲစခန်း သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၁၄)ဖြင့် ရေးဖွင့်ကာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်း
ဓာတ်လိုက်နေသူကို အသက်သေခံပြီး တွန်းထုတ်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်က လေးစားဖွယ် စိတ်ဓာတ်ပိုင်ရှင်
7/01/2014 04:36:00 PM crime-news
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၁
၃၀.၆.၂၀၁၄ရက်နေ့ ၁၃၄၀အချိန် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်း
(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေ သံချည်သံကွေး လုပ်သားဖြစ်သူ ကိုလမင်းထွန်း (၂၇)နှစ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် နဖူးထိပ်ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ဝဲဘက်ခြေဖ ၀ါးပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ(၁)ချက်တို့ ရရှိထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရ
ကန်ထရိုက် တိုက်တွင် သွယ်တန်းထားသော လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးနှင့်သံပိုက်
ထောက်တိုင်တို့ထိမိပြီး သံပိုက်ထောက် တိုင်သို့လျှပ်စစ်စီးဝင်နေကြောင်း၊ ၎င်းထောက်တိုင်အား သံချည်သံကွေး အလုပ်လုပ်ကိုင်သူ ကိုနိုင်ဝင်း (၄၇)နှစ်မှကိုင်မိပြီး ဓါတ်လိုက်ခံနေရစဉ် သေဆုံးသူမှ တွန်းဖယ်ပေးခဲ့ရာ
၎င်းကိုပါ ဓါတ်လိုက်ခံရပြီး ဒဏ်ရာရရှိသေဆုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကိုနိုင်ဝင်းမှာ
ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၎င်းသေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းသေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၄)ဖြင့် ရေးဖွင့် ကာ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ
ဗောတံတားတွင်ရပ်တန့်ထားသောယာဉ်ကို အရက်မူးနေသူမှ တက်ရောက် မောင်းနှင်သဖြင့် အရှိန်လွန်ကာ မြစ်ထဲသို့ကျသွားခဲ့ပြီး ဒဏ်ရာရ
6/30/2014 05:42:00 PM accident
၂၉.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၅၀၀ အချိန်တွင် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင် အမှတ်(၅)ဗောတံတား ပေါ်မှ ယာဉ်တစ်စီး ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းပြုတ်ကျခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်နေ ကားဝပ်ရှော့အလုပ်သမားဖြစ်သူ ကျော်ဇင်(ခ)
ကျော်ဇင်စိုးသည် ပြုပြင်ဆဲ ဆူဇူကီးအမျိုးအစား မီးခိုးရောင်ယာဉ်အားမောင်းနှင်
လာပြီး အဆိုပါဗောတံတားတွင်ရပ်တန့်ကာ အပန်းဖြေနေစဉ် အနီးရှိအရက်မူး
နေသူ သာကေတမြို့နယ်နေ သန်းဇော်ဦး၊(၂၁)နှစ်မှ ၎င်းယာဉ်ကို တက်ရောက်
မောင်းနှင်းခဲ့သဖြင့် အရှိန်လွန်၍ မြစ်အတွင်းသို့ ကျသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ မြစ်အတွင်းကျသွားခဲ့သဖြင့် ယာဉ်အနည်းငယ်ပျက်စီးပြီး သန်းဇော်ဦးတွင်
ပွန်းပဲ့နာကျင် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံတွင် အတွင်းလူနာ
ယင်းသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အတွက် သန့်ဇော်ဦးအား ဆိပ်ကမ်းမြို့မရဲစခန်းယာဉ်
(ပ)၁၃/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၃၃၇/၂၇၉ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်
တောဆင်ရိုင်းမှနှာမောင်း ဖြင့်ရစ်ပတ်ကာ ကိုင်ပေါက်ခံရ၍ အမျိုးသမီး(၁)ဦး သေဆုံး
6/29/2014 09:48:00 AM crime-news
၂၇.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၆၀၀ အချိန် တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ ဥက္ကံရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်
တိုက်ကြီး မြို့နယ်၊ ချောင်းစောက်ကျေးရွာအရှေ့ဘက်(၂)မိုင်ခန့်အကွာရှိ ကျွန်းစိုက်
ခင်းတောစပ်လျှိုအနီးတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုတောဆင်ရိုင်း(၁)ကောင်မှ နှာမောင်းဖြင့်ရစ်ပတ်ကာ ကိုင်ပေါက်ခံရကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ အဆိုပါနေရာတွင် ကျွန်းစိုက်ခင်းခြံစောင့်ဖြစ်သူ ချောင်းစောက် ကျေးရွာနေ ဦးအောင်ဒင်၏ဇနီး ဒေါ်သေးတင်၊ (၆၁)နှစ်မှာ ၀မ်းဗိုက်ပေါက်ထွက်၊ ခါးရိုးကျိုး၊ ၀ဲလက်ကျိုးဒဏ်ရာများဖြင့်သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ ၂၆.၆.၂၀၁၄ရက်နေ့၁၈၃၀အချိန်ခန့်တွင် သေဆုံးသူနှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ တို့မှာ အဆိုပါတောထဲရှိသစ်ပင်ပေါ်၌ပြုလုပ်ထားသော လင့်စင်ပေါ်တွင်ရှိနေစဉ် တောဆင်ရိုင်း(၁)ကောင်ရောက်ရှိလာပြီးလင့်စင်ထိုးထားသည့် သစ်ကိုင်းကိုဆွဲချသဖြင့် သေဆုံးသူနှင့်ခင်ပွန်း ဖြစ်သူတို့မှာ အောက်သို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ကြောင်း၊
တောဆင်ရိုင်းမှသေဆုံးသူအား နှာမောင်းဖြင့် ရစ်ပတ်ကာ
ခင်ပွန်းဖြစ်သူဦးအောင်ဒင်မှာ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီး ၎င်းတွင်လည်း လင့်စင်ပေါ်မှပြုတ်ကျခဲ့သည့်အတွက် ရင်ပတ်နှင့်ညှပ်ရိုးပွန်းဒဏ်ရာ ယာဘက်နံရိုးနှင့်ပေါင်တို့တွင် နာကျင်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့ကြောင်း
ယင်းသို့ ဒေါ်သေးတင် သေဆုံးခဲ့ရသည့်အတွက်ဥက္ကံနယ်မြေရဲစခန်းသေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၄/၂၀၁၄)ဖြင့်ရေးဖွင့်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ခရီးသည်အမျိုးသား(၂)ဦးမှ အငှားယာဉ်မောင်း၏ငွေများကို လုယက်မှုဖြစ်
6/26/2014 08:26:00 PM crime-news
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၆
၂၅.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၈၀၀ အချိန်တွင် ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ညောင်တုန်း
ဖြစ်စဉ်မှာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်နေ အငှားယာဉ်မောင်း ဦးမိုးအောင်ဇော်၊ (၄၀)နှစ်
သည် ၎င်း၏အငှားယာဉ်ဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ဒဂုံ-ဧရာအဝေးပြေးဝင်းရှေ့၌ ခရီးသည်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် အမျိုးသားလူငယ်(၂)ဦးမှ ထန်းတပင်မြို့နယ်သို့
ငွေကျပ်(၅၀၀၀)ဖြင့်ငှားရမ်းခဲ့၍ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန် -ညောင်တုန်းလမ်း၊ အစုကြီးကျေးရွာထိပ်အနီးအရောက် ယာဉ်နောက်ခန်းတွင် လိုက်ပါလာသူလူငယ်မှ အပေါ့သွားမည်ပြောသဖြင့် ယာဉ်အားခေတ္တရပ်ပေးခဲ့ပြီး ဆက်လက်မောင်းနှင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဓါတ်တိုင်(၂)တိုင်ခန့်အရောက်တွင် ယာဉ်
ရှေ့ခန်းရှိလူငယ်မှလည်း အပေါ့သွားလိုကြောင်းပြောသဖြင့် ယာဉ်အားရပ်ပေး
ခဲ့ပြီး ပြန်တက်လာစဉ် ယာဉ်နောက်ခန်းတွင် လိုက်ပါလာသည့်လူငယ်မှ ၎င်း၏
လည်ပင်းအား သိုင်းဖက်၍ချုပ်ထားကာ ယာဉ်ရှေ့ခန်းရှိလူငယ်မှ ၎င်း၏လက်အား ဆွဲကိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းမှရုန်းကန်စဉ် ယာဉ်နောက်ခန်းရှိလူငယ်မှအိတ်ကပ်
အတွင်းရှိ ငွေ(၂၁၀၀၀)ကျပ်အားလုယူခဲ့၍ သံတုတ်ဖြင့်ရိုက်မည်ပြုရာ လူငယ်
ထို့နောက် ဦးမိုးအောင်ဇော်မှ ဒဂုံ-ဧရာအဝေးပြေးဂိတ်ရှိ သူငယ်ချင်းများအား သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီး တက်သစ်နယ်မြေရဲစခန်းမှတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ အဆိုပါလူငယ်(၂)ဦးအားလိုက်လံရှာဖွေရာ ယာဉ်ရှေ့ခန်းတွင်လိုက်ပါခဲ့သူ လူငယ်အား တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့သဖြင့် စစ်ဆေးရာ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊
(၈)ရပ်ကွက်နေ ပိုင်မင်းလွင်၊ (၁၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးသိန်းစိုးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပြီး ထွက်ပြေးသွားသူမှာ ၎င်းနှင့် ယောက္ဖတော်စပ်သူ ကောင်းခန့်ဇော်၊ (၂၅)နှစ်
၎င်းတို့(၂)ဦးအား ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ တက်သစ်နယ်မြေရဲစခန်း(ပ)၈၆/၂၀၁၄၊
ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၈၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူကာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူ
ကောင်းခန့်ဇော်အား ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိ
ဈေးဝယ်နေသူ အမျိုးသမီး၏စလင်းဘက်အိတ်အတွင်းမှ ငွေများနှိုက်ယူနေသည့် ခါးပိုက်နှိုက် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖမ်းဆီးရမိ
6/23/2014 02:15:00 PM crime-news
၂၁.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် လသာမြို့နယ်၊ (ဂ) ရပ်ကွက်၊ သိမ်ကြီးဈေး(ဒီ)ရုံရှေ့၌စောင့်ကြည့် သတင်းစုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့စောင့်ကြည့်နေစဉ် ၁၀၁၀ အချိန်ခန့်၌ သိမ်ကြီးဈေး(ဒီ)ရုံရှေ့
မုန့်ဆိုင်တန်းဝင်ပေါက်အနီးတွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်တွင်းကြီး
မြို့နယ်နေ မစန်းအေး၊ (၃၈)နှစ်၊ (ဘ)ဦးကျော်သောင်းမှ ဈေးဝယ်နေသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလွယ်ထားသော စလင်းဘက်အိတ်အားဇစ်ဖွင့်၍ အတွင်းမှငွေကျပ် (၂၂၀၀၀)ကို နှိုက်ယူနေစဉ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ဖမ်းဆီးရမိသဖြင့် ၎င်းအား လသာမြို့မရဲစခန်း(ပ)၁၉၁/၂၀၁၄၊
ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၇၉(နှိုက်)/၅၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ကလေးငယ်တစ်ဦး ဆော့ကစားရာမှ ရေမြောင်းအတွင်းကျပြီး ရေနစ်သေဆုံး
6/20/2014 06:31:00 PM crime-news
၁၈.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၇၃၀ အချိန်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်တွင် (၃)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ၁၆၃၀ အချိန်ခန့်က ၎င်းကလေးငယ်၏မိခင်သည် တစ်ရပ်ကွက်တည်းနေ အဒေါ်ဖြစ်သူ၏နေအိမ်သို့ ကလေးငယ်နှင့်အတူသွားရောက်ခဲ့ပြီး လူကြီးများမှာ စကားပြောနေခဲ့ကြောင်း၊ ထိုစဉ် ကလေးငယ်မှာခြံဝင်းအတွင်း၌ဆော့ကစားနေ
ခဲ့ကြောင်း၊ ခဏအကြာတွင် ကလေးငယ်အားမတွေ့ရှိသဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေရာမှ ၎င်းနေအိမ်ရှေ့ရှိ အကျယ်(၈)ပေ၊ အနက်(၄)ပေခန့်ရှိသော ရေမြောင်းအတွင်းသို့
ကျနေသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ပို့အပ်စဉ်
သေမှုသေခင်းအမှတ်စဉ် (၁၃/၂၀၁၄) ဖြင့် ရေးဖွင့်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိ
လင်မယားချင်းစကားများနေသည်ကို တစ်လမ်းတည်းနေသူမှ ဆူညံသည်ဟု ပြောဆိုသဖြင့် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားစဉ် ဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူသေဆုံးပြီး ဇနီးဖြစ်သူဒဏ်ရာရ
6/17/2014 07:30:00 PM crime-news
၁၆.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၂၃၀ အချိန်တွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းကြီး
ကျေးရွာနေ ဆယ်အိမ်မှူး ဦးမြင့်လွင်သည် မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်းမှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်
အောင်မင်္ဂလာ(၁)လမ်း၌ ဓါးထိုးမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းအရ သွားရောက်
ထိုသို့သွားရောက်စစ်ဆေးရာ အဆိုပါလမ်းမပေါ်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်းကြီးကျေးရွာ
နေ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုး(၃၁)နှစ်အား ကျောကုန်းယာဘက်ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ယာမျက်ခုံးပွန်းခြစ်ဒဏ်ရာများရရှိထားသည်ကိုတွေ့ရှိရပြီး ၎င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးစောမင်း(၅၆)နှစ်တွင် ၀ဲဘက်ရင်အုံထိုးသွင်းဒဏ်ရာ(၁)ချက်၊ ၀ဲဘက်နံစောင်း
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒေါ်မြင့်မြင့်စိုးအားမေးမြန်းရာ ၂၂၀၀ အချိန်ခန့်က
၎င်းတို့လင်မယား(၂)ဦး နေအိမ်၌ စကားများနေစဉ် တစ်လမ်းတည်းနေ
ရဲလေး(ခ)ရဲလင်းအောင်(၂၀)နှစ်၊ (ဘ)ဦးဌေးအောင်မှာ နေအိမ်ရှေ့သို့
ရောက်ရှိလာကာ ဆူညံသည်ပြောဆိုရာမှ ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများခဲ့
ကြောင်း၊ ခင်းပွန်းဖြစ်သူမှ နေအိမ်ရှေ့သို့ တုတ်ဖြင့်ထွက်ရိုက်ခဲ့ရာ ရဲလေး
(ခ)ရဲလင်းအောင်မှ အသင့်ယူဆောင်လာသော အရိုးအသွား(၈)လက်မ
ခန့်ရှိဓါးဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားထိုးခဲ့၍ ၎င်းမှ ၀င်ရောက်တားမြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ဝင်ရောက်တားမြစ်စဉ် ရဲလင်းအောင်မှ ၎င်းကိုလည်းဓါးဖြင့်ထိုးခဲ့၍
ယင်းသို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ရဲလေး(ခ)ရဲလင်းအောင်အား အရေးယူပေးပါရန်
ဆယ်အိမ်မှူး ဦးမြင့်လွင်မှ တိုင်တန်းချက်အရ မင်္ဂလာဒုံမြို့မရဲစခန်း(ပ)
၂၆၄/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ-၃၀၂/၃၂၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ကာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေး
ဖုန်းဆိုင်အတွင်းမှ ပစ္စည်းများဝင်ရောက်ခိုးယူခဲ့သူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူ
6/16/2014 06:10:00 PM crime-news
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၆
၁၂.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၀၆၄၅ အချိန်တွင် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်နေ
ကိုရဲဇော်အောင်သည် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ကရင်အမျိုးသားရပ်ကွက်
တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသော ၎င်းပိုင် မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်၏တံခါးပွင့်နေကြောင်း
ကြားသိရသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ မှန်ဗီရိုအတွင်းမှ ဟန်းဆက်မျိုးစုံ
အလုံး(၂၀)၊ တက်ဘလက်(၂)လုံး၊ ငွေဖြည့်ကတ်များနှင့် ဆင်းကတ်(၃)ကတ်၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်(၂၇၀၉၅၀၀)မှာ ပျောက်ဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် စုံစမ်းအရေးယူပေးပါရန်တိုင်တန်းခဲ့၍ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့မရဲစခန်း
(ပ)၃၇၇/၂၀၁၄၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ- ၃၈၀ ဖြင့် အမှုဖွင့်စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး၊ အကူတပ်ဖွဲ့ခွဲ၊
အုပ်ချုပ်မှုတပ်ခွဲ၊ မှုခင်းအကူဌာနစုမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ စုံစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ခိုးမှုပြစ်ချက်ဟောင်းရှိသူ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ မြို့သစ်(ဂ)ရပ်ကွက်နေ မောင်ချစ်(ခ)
မောင်မာင်ချစ်၊ (၂၀)နှစ်၊ (ဘ)ဦးလှဝင်းနှင့် ဇင်ကိုဦး၊ (၂၅)နှစ်၊ (ဘ)ဦးမျိုးမြင့်တို့
(၂)ဦးမှာ ဟန်းဆက်များနှင့် ငွေဖြည့်ကတ်များလိုက်လံရောင်းချ နေပြီး ခိုးမှု
ကျူးလွန်ထားကြောင်း မသင်္ကာဖွယ်သတင်းအရစုံစမ်းခဲ့ရာ ၁၃.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့
၁၉၀၀ အချိန်တွင် ၎င်းတို့(၂)ဦးကို အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ပိတောက်(၁)လမ်းပေါ်တွင်
၎င်းတို့(၂)ဦးအားစစ်ဆေးရာ ပိုင်ပိုင်၊ အာနိုးဆိုသူတို့နှင့်(၄)ဦးအတူ ၁၂.၆.၂၀၁၄
ရက်နေ့ ၀၂၀၀ အချိန်ခန့်က အလုံမြို့နယ်၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်းအတိုင်း
လမ်းလျှောက်လာစဉ် မိုးရွာသဖြင့် အခင်းဖြစ်ဖုန်းဆိုင်ရှေ့၌ မိုးခိုခဲ့ကြပြီး ဆိုင်အတွင်းမှပစ္စည်းများခိုးယူရန်တိုင်ပင်ခဲ့ကြကာ ဆိုင်ရှေ့သစ်သားတံခါးမကြီး
အားဖွင့်၍ အမှုမှပျောက်ဆုံးပစ္စည်းများအား ၀င်ရောက်ခိုးယူခဲ့ကြကြောင်း
၎င်းတို့ထံမှ အမှုမှပါဆုံးသွားသော ပစ္စည်းအချို့အားပြန်လည်သိမ်းဆည်းရမိ
ခဲ့ပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာတွင်အတူပါဝင်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသော ပိုင်ပိုင်နှင့် အာနိုးတို့အား ဖမ်းဆီးရမိရေး စုံစမ်း
ယာဉ်တိုက်မှုကြောင့် ယာဉ်(၇)စီးပျက်စီးပြီး လူ (၇)ဦးဒဏ်ရာရ
6/16/2014 07:27:00 AM accident
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၁၅
၁၄.၆.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၇၄၅ အချိန် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း အတိုင်း အရှေ့မှ အနောက်သို့ ယာဉ်မောင်း(စုံစမ်းဆဲ)မောင်းနှင်လာသည့် ၄က/----